Microsoft wuxuu ka tagayaa "Apple Watch dilaa", Microsoft Band 2 | Wararka IPhone
Microsoft wali ma heleyso qalabkeeda si ay u qanciso dadka isticmaala, go'aamadaasna xitaa way ka sii xumaan doonaan. Haddii aad haysatid Microsoft Band 2, taas oo aan macquul ahayn, waa inaad ogaataa taas Microsoft ayaa ka tagtay mashruuca, in jijimadiisa aan la sii iibin doonin, ugu yaraan dukaamada rasmiga ah, iyo inay xitaa baabi'isay qalabkii soo-saaraha. markaa ma awoodi doontid inaad barnaamijyo cusub u sameysatid Microsoft Band 2. Kan loogu talo galay inuu si adag ula tartamo Apple Watch 2 xitaa ma uusan gaarin hal sano oo nolosha ah.
Dhowr usbuuc ka hor wararka xanta ah ee ku saabsan jiilka cusub ee Microsoft Band ayaa soo dhowaan karay markii la ogaaday in saamiga jijimadda Microsoft uu bilaabay inuu hooseeyo. Laakiin warka ayaa ah in kaliya sanadkaan aysan jiri doonin wax cusbooneysiin ah, laakiin midka hada socda ayaa sidoo kale joojiyay in la iibiyo, iyadoo Microsoft aysan waxba ka oran mustaqbalka aaladda.. Qoraalka rasmiga ah ee Microsoft waa sida soo socota:
Waxaan iibinay dhamaan alaabteenii horey u jirtay ee Band 2 mana lihin qorshayaal aan ku sii deyno qalab kale oo Band ah sanadkan. Waxaa naga go'an inaan taageerno isticmaaleyaasha hadda jira ee Microsoft Band 2 iyada oo loo marayo Microsoft Stores iyo kanaalada adeegga macaamiisha.
Ma garanayno waxa ka go'an Microsoft ee taageerida isticmaaleyaasha hadda jira markay ka baxaan xitaa qalabka horumarinta ee u oggolaanaya abuuritaanka codsiyada jijin. Xitaa koox ka shaqeynaysay ku wareejinta Windows 10 jijimadda ayaa kala daadisay sida ku cad macluumaadka shirkadda u dhow. Warka xun ma aha oo kaliya waxa loola jeedo in laga tago qalab ka yar hal sano jir, laakiin loogu talagalay kalsooni darrada ay ku abuurto dadka isticmaala, kuwaas oo arka sida markii ay $ 250 ku kharash gareeyeen curcurka Microsoft ay uga tagto iyaga oo xanniban isbedelka ugu horeeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Microsoft wuxuu ka tagayaa "Apple Watch dilaa", Microsoft Band 2
Facebook wuxuu bilaabay Suuqa, waa qaab cusub oo loo iibsado waxna loo iibsado